Saya Hein Tint Zaw (http://www.heintinzaw.com) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Horoscope Website Saya Hein Tint Zaw (http://www.heintinzaw.com)
Saya Hein Tint Zaw (http://www.heintinzaw.com)
Saya Heigh Think Zaw, ဆရာဟိန်းတင့်ဇော်ဆိုဒ်တွင် (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဗေဒင်၊ ယတြာ၊ ဂမ္ဘီရအတတ်၊ အဓိဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်နည်းများကိုဖော်ပြပေးသောမြန်မာဗေဒင်ဟောစာတမ်းဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိသားစုယတြာ၊ စီးပွားရေးယတြာ၊ ခေတ်လူငယ်များအတွက် အချစ်ရေးယတြာ၊ ငွေကြေးယတြာ၊ သားသမီးရေးယတြာ၊ အိမ်ထောင်ရေးယတြာ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပက်သက်သောယတြာများကိုလည်းဖော်ပြပေးထားသည်။ အွန်လိုင်းဗေဒင်ချစ်သူများအတွက်လည်းအချိန်တိုအတွင်းမေးမြန်းလာသမျှကိုဖြေကြားပေးလေ့ရှိသည်။
ဗေဒင်ပညာရပ်များကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်လည်းကျင့်စဉ်များ၊ ပညာရပ်များကိုဖော်ပြပေးထားသည်။ မြန်မာ့ စာပေလောကရှိရှားပါးစာပေများ၊ တစ်ခြားသောစာအုပ်များကိုလည်းဆိုဒ်အောက်ခြေတွင် အလွယ်တကူဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးထားသည်။
Saya Hein Tint Zaw, Bay Din
Saya Hein Tint Zaw is an online Burmese Horoscope website which aims to provide weekly horoscope andyattaya. Saya Hein Tint Zaw is the internet’s most popular astrology destination in Myanmar. Saya Hein Tint Zaw provides love compatibility horoscope, career horoscope, wellness horoscope birth horoscope, 12 months transit and several other kinds of horoscopes for Burmese People. Offeringahands-on approach to understanding astrology, Saya Hein Tint Zaw also focuses on moving beyond one’s daily horoscope and making astrology accessible to everyone – from beginners to enthusiastic followers.
Previous articleBurmese Classic (http://www.burmeseclassic.com/baydin1.php)
Next articleDr Tin Bo Bo (http://compubaydathukhuma.blogspot.in/)
Hay Zar Moe Dec 21, 2014 at 11:24 am
ဆရာဟိန်းတင့်ဇော်ကို ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လိပ်စာလေးသိပါရစေရှင်
GandaWinAdmin Dec 22, 2014 at 3:51 am
Hay Zar Moe Dec 22, 2014 at 7:01 am
ထိုင်းဖုန်းရော မြန်မာပြည်ကဖုန်းရော စက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင် ခေါ်ဆို၍မရပါ
Hay Zar Moe Dec 26, 2014 at 8:53 am
ဆရာဟိန်းတင့်ဇော်ကိုဗေဒင်မေးချင်လို့ လိပ်စာလေးသိရင်ပြောပြပေးနိုင်မလားရှင် အရေးကြီးလို့ပါ